Ny lafiny roa tsara indrindra fampiasana kidoro lohataona FactoryPrice-Rayson | Rayson
Famerenana am-pandriana milamina tsara
Mpamatsy ambony indrindra amin'ny haben'ny Spring Mattress tsara indrindra
Mamy Pillow Mamy Top Plush Pocket Spring Mattress
Rayson any amin'ny faritra indostrialy Rayson, làlana Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Sina. Vokatra lehibe fampiasana lafy tsara indroa ampiasaina amin'ny kidoro lohataona FactoryPrice-Rayson
Ity vokatra ity dia tsy ny entana apetraka amin'ny habaka fotsiny fa tena mameno toerana iray. - Hoy ny iray amin'ireo mpanjifanay.
Toerana niaviany: Guangdong, Sina (Tanibe)
hentitra: Soft / Medium / Hard
Fe-potoana ara-barotra: EXW, FOB, CIF, Isam-baravarana
Karazan'orinasa: Factory, fanamboarana
Lamba: lamba ba nataony
fampiharana: Home, trano fandraisam-bahiny, trano
Fe-potoana fandoavana: TT / LC, DEPOSIT 30% TOKONY HALOHANA ALOHA NY famokarana, fifandanjana 70% hanoherana ireo kopian'ny dokam-barotra fandefasana ao anatin'ny andro 7 miasa.
Izahay dia manaraka tsara ny fizotran'ny fanaraha-maso kalitao mahazatra mba hahazoana antoka fa mahafeno na mihoatra ny nandrasan'ny mpanjifanay ny vokatra. Ho fanampin'izay, manome serivisy aorian'ny varotra izahay ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao. Taorian'ny taona maro nivoarana dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifantsika izahay manerantany. Azafady mba matokia fa zonay ny manondrana ny vokatray ary tsy hisy ny simba amin'ny entana aterina. Raisinay an-tsitrapo ny fanontanianao sy ny antsonao. Miaraka amin'ny tsipika famokarana feno sy ny mpiasa efa za-draharaha, Rayson dia afaka mandrafitra, mandroso, manamboatra ary mizaha toetra ny vokatra rehetra amin'ny fomba mahomby.
Mandra-pahoviana no haharetan'ny kidoranao? Samy hafa ny kidoro rehetra. Raha manipy amin'ny alina ianao na mifoha amin'ny fanaintainana dia tonga ny fotoana ahazoana kidoro vaovao na inona na inona taonany. Mamporisika anao izahay hanamarina ny marika sy hanolo isaky ny valo taona, fara fahakeliny, inona ny fomba fandoavam-bola ekenao? LC amin'ny fahitana / avy amin'ny TT, Deposi 30% ary fifandanjana 70% dia mifanohitra amin'ny kopian'ny antontan-taratasy fandefasana witinin 7 andro fiasana. Ahoana no famoahana ny kidoro ahodina? 1. Apetaho amin'ny baoritra eo amin'ny efitranonao ny baoritra, esory tsara ny kidoro ary apetraho eo am-pandrianao. 2. Sasao tsara amin'ny kitapo ny kitapo ivelany mba hahazoana antoka fa tsy hokapainao ny plastika ratsy ao anatiny na ny kidoro, aza mitory antsy. 3. Esory eo ambony fandrianao ilay kidoro nasiana tombo-kase 4. Sasao tsara ny kitapo plastika miaraka amin'ny famantaranandro rehefa manomboka decompress ny kidoro, esory ny kitapo plastika. 5.Avelao 24 ora hivelatra tanteraka ny kidoranao vaovao.
1.Flat voafintina amin'ny paleta hazo
2.Roll amin'ny carton na kraft taratasy
Professional Hot Sell Cheap Bonnell Spring kidoro ho an'ireo mpamokatra any Afrika
Matory lafo indrindra amin'ny vidiny tsara
Hard Foam napetraka Pillow Top Pocket Spring Mattress